USomizi ufunela usizo abakhahlanyezwe yizikhukhula
USOMIZI Mhlongo uthe amphathe kabuhlungu ama-video aveza umonakalo wezikhukhula eKZN Isithombe:INSTAGRAM
USAZIWAYO odabuka KwaMashu, uSomizi Mhlongo, usephonsele inselelo amaciko nabagqugquzeli bemicimbi baKwaZulu-Natal ukuba bahlele indumezulu yomcimbi ngenhloso yokuqongelela imali yokuxhasa imindeni ekhahlanyezwe yizikhukhula.
"Ngithanda ukuphonsela inselelo, ikakhulukazi amaciko aseThekwini, anjengoDJ Tira, abakwaziyo ukuhlela imicimbi. Abagqugquzeli bemicimbi abanjengoMax (Mqadi weMax's Lifestyle) ukuba bahlangane kuleli sonto bese behlela ikhonsathi ezokuba seMoses Mabhida Stadium.
“Wonke amaciko akulo lonke leli azonandisa ngokuzinikela kodwa amathikithi adayise esangweni ngentengo ephansi, bese yonke imali ezotholakala lapho ifakwe esikhwameni sokuxhasa abakhahlamezekile."
USomizi uqhamuke nalesi siphakamiso emuva kokuzwakala kwezindaba ezithi isibalo sabantu asebetholakale beshonile singaphezu kuka-300.
Leli jaji lama-Idols SA libuye lanxusa ukuba kuphonswe itshe esivivaneni ukutakula abantu abashonelwe nabalinyalelwe yizimpahla zabo.
Uthe selokhu ebone ama-video omonakalo wezikhukhula ezinkundleni zokuxhumana umoya wakhe ubuhlungu.
"Umbuzo wami uthi akukho yini esingakwenza ngokushesha ngalokhu? Ngifuna ukubamba iqhaza futhi ngiyakholelwa ekutheni noma wubani obonayo manje angenza okuthize. Izwe lonke lingenza okuthize, okungaba wukunikela ngezingubo noma ngokuthize esikhwameni sokuxhasa abakhahlamezekile."
Kwenzeka lokhu nje luyabuya uhlelo olukhuluma ngempilo kaSomizi yangempela futhi ubonakala kumazwibela ekhuluma ngokwenzeka phakathi kwakhe noMohale Motaung.